Haliska ku hareereeysan tallaalka Astra Zeneca oo isa soo taraysa & dhib hor leh oo lagu arkay (Dhegeyso) | Hadalsame Media
Home Caafimaadka Haliska ku hareereeysan tallaalka Astra Zeneca oo isa soo taraysa & dhib...
Haliska ku hareereeysan tallaalka Astra Zeneca oo isa soo taraysa & dhib hor leh oo lagu arkay (Dhegeyso)
(Stockholm) 08 Maarso 2021 – Haweenay kale ayaa la kulantay kiis dhiig xinjirow ah kaddib markii la siiyey tallaalka ay farsamayso Astara Zeneca ee lagula tacaalo Covid-19.
Marka xinjirowga laga soo tago, dhiigga haweenaydan ayaa markii la baaray la ogaadey inay ku yaraadeen saxan-yarooyinka oo ah unugyo yar yar oo ku shaqa leh dhiig xinjiraynta, taasoo dhacday kaddib markii la tallaalay.
Horay waxaa u jirey laba haween ah oo ay midi 30 jir ahayd midna 60 jir oo dhibkan oo kale qabsaday. Haweenayda yari waxay u baahatay daryeel deg deg ah oo waxaa la dhigay qaybta ICU-ga, halka haweenayda wayni ay dhimatay.
Previous articleMadaxwaynayaasha Gobollada Soomaalida & Cafarta oo la is hor fariisiyey (Wasiirkee loo xilsaaray?)
Next article”Somalia waxay u baahan tahay qof u dhisa DOWLADNIMO isaga ka wayn oo gadaashii loo aayo, may mid qof ku jimaysan”